Xidhiidhka ka dhaxeeya humaaga suuganta iyo habdhiska dareen waddka. – Hornafrik Media Network
Ummad kasta oo meel kuwadda nooliba waxay leedahay af, dhaqan, iyo soyaal soo jireena oo ay ummmadaha kale ee dunida kaga duwan tahay. Intaasuun kuma eekee afkasta wuxuu sii leeyahay luuqad kale oo ku xadfan dhidibadiisa oo layidhaah Suugaan afka qalaadna <literature>.
Suugaantu waa sohda uu leeyahay afkeenu, waana luuqad luuqadaha ku dhexjirata oo muujisa dareen gaar ah oo kaduwan hadalka caadiga ah ee tiraabta, waana hadal la yidhaahdo intiisa ugu mucda badan uguna miisan iyo muga badan oo inta badan lagu cabiro aragtiyo kala duwan sida in dad lagu wacyi geliyo, lagu tilmaamo laguna dhiiri-geliyo iwm.
Intaa hadaan ku dhaafo waxay suugantu tahay, faahfaahin dheerada waxaad ka heli kartaa boogaagteena qoran iyo shabakadaha ku can baxay sugaanta iyo falanqayntoodaba.
Suugaanta waxa inta badan loo qaybiyaa maanso, sheeko, riwaayad iyo maahmaah waa marka guud ahaan suugaanta la abla-ablaynayo, waa barada aan isleeyahay waxa jira xidhiidh ka dhaxeeya qaybahan iyo sayniska oo ka hadla inta badan waxa nool iyo astamaahiisa.
Manso: Waa hooyada sugaanta waana qaybta ugu salka-balaadhan, tiro iyo tayana ugu sareysa , waxaanay ka kooban tahay gabay, geeraar, hees,buraanbur, jacbur, afaray iyo inta iga maqan.
Hadaan iskudayo in aan midkasta soo koobo macnihiisa guud si aan ugaadho dulucdayda, Gabaygu waa hooyada ama boqorka maansada, tariikh ahaana ugu da’weyn, inta badana waxa tiriya raga inkasta oo dumarkuna alifaan. Geeraar waa qayb ka mid ah maansada oo inta badan lagu sheegu inuu yahay mid facweyn oo waqti badan soomalidu isticmaali jirtay, waxaanu ku jira kaalinta labaad.
Heestu waa qayb ka mid ah maansada da’ahaana waa qaybta seddexaad ee maansada, waa halkaan u socdee waxay ka mid tahay aragti ahaantayda inay tahay qaybta suugaanta ay ugu badan tahay in sugaanyahanadeenu ku muujiyaan dareen ka duwan dareenka ay ku tiriyaan gabayga.
Hadaba sababta ugu dhalisay in aan xidhiidh ka dhaxeysiiyo suugaanta iyo sayniska waa dareenkan iiga dhex muuqda inta badan suugaanteena weliba baddan heesta oo aad moodo badd qaab dhismeedka ay u taalo sameyskeedu yahay mid dareen ku salaysan weliba gaar ah, maxay tahay sababtu heestu;
Miisan ahaan way ka yar tahay gabayga waana 6-12 shaqal ama shaqal u eeke jiib iyo jaanba leh
Waa badda ugu fudud ee lagu muujiyo humaag aan kaaga baahneyn eray cul-culus waa hadaad tahay sugaanyahan far-shaxana oo muujin kara musawirka u muuqda
Arrinta seddexaad ee ay heestu u noqotay mid dareen badan waxa iyadna aan ka madhneyn, inay tahay badda ugu fudud ee wax lagu cabiro.
Seddex arrimood bay ila tahay fikir ahaantay inay heestu ku mutaysatay dareenkan xoogan ee jiita qalbiyada dad badan oo had iyo jeer buuxisa kashooda.
Hadaba, hadaan ku horeeyo heesta maxay tahay xidhiidhka ka dhaxeeya iyada<heesta> iyo sayniska weliba qaybtiisa dareenka khusaysa ee loo yaqaano hadhiska dareen wadd ka <nerve system> oo ay hogaaminayaa dareen waddka dhexe <CNS>,dareen waddka xangulada <Spinal-cord> iyo dareenada wadayaasha lusha <Peripheral>.
Ninka hal abuurta ahi ha ahaado abwaan, mu-alif ama maansoyahan si uu wax kaaga dhaadhiciyo dareenkaagana u kasbado waa in uu ku soo maraa shanta dareen ee alle inagu abuuray ee kala ah urta, araga, dhadhanka, maqalka iyo taabasha, haddii aanu shantaa dareen mid ahaan kusoo marrin qofka hal abuur lagum tilmaami karo.
Hadaba intaynaan u gudo gelin qaabkay suugaanyahanadeenu us oo maraan shantan dareen, dadkii hore ee sugaantan ahaa dhidibadeeda ma kula tahay inay ahayeen dad wax ka aqaana dareemadan? Sidaan aaminsanahay HAA waxay ahayeen dad dareensan inay jirto waddooyin loo marro dadkan si wax looga dhaadhiciyo.
Ninka sugaanyahankii muxuu dadka kaga duwan yahay? Bani’aadamku dareen buu wada leeyahay waxna wuu wadda dareemaa laakin isku si midaata uma wada turjuntaan dareenkaas kala duwanaanshiyahay keentay in aan si dareen loo wada micnaysan ayaa kelifta in qofna uu muujin karo dareenkiisa oo muxuu ku muujinayaa? Hadba inta ay yihiin erayada uu xambaarsan yahay, qofna waa mid siyaabo kale ku muujiya dareenkiisa.
Sugaanyahaynka qudhadiisu inuu wax alifaa waa mid ku xidhan hadba dareenka uu qataa inta uu leeg yahay, mugga iyo miisanka uu yeelan doono badda sugaanta uu ku cabiri doono dareenkiisa iyadna waa mid ku xidhan hadba raadka dareenka uu sidaa ku abuuro, tusaale ahaan ‘ in diriri dhacdaa waa dhibaato ka timid labada dhinac ee ay ka aloosan tahay laakin in dad ku naf wayaan waa raad ka mid ah maxsuulada ka dhashay colaadaas, colaadu markaas waa dariiqada abuurtay in lagu qudh waayyo.
Tusaale ahaan; qof baad jeclaatay in qofkaas jacaylkiisu noqdo mid waqti dheer kugu sidka ruuxaad u hayso waxay ku xidhan tahay hadba sida uu ku gashiyo, sidaasi si la mid ah ninka sugaanyahan ka ahi inay erayda uu isticmalayaa noqdaan kuwo dareen leh waxay ku xidhan tahay hadaba raadka uu ku leeyahay dareenka uu sidaa. In aynu isla fahanay baan filayaa.
Hadaba waxa wax abuurayaa waa falaadhaha dareenka ee kaaga imanaya bulshad aad la nooshahay iyo aragtida dunida aynu ku noolnahay, maaha in layska noolaado ee waa micno u nolow.
Hadaan isla fahanay sugaanyahan iyo wuxuu yahay, sideebuu dareenka u turjuntaa humaaga nin sugaanyahan ka ah? In su’aashan aynu ka jawaabnaa waxay ku xidhan tahay hadba dareenka uu ku sugan yahay ninka suuganyahankii. Surro-gal maah in aan soo wadda qaato sugaan oodhan laakin waxaan iskudayi in aan soo qaato kuwo ka mid ah.
Aan soo qaato hees ay qaado Amina Cabdilaahi oo uu eryadeeda leeyahay Axmed Saleebaan Bidde, waa heesta aan la dhacay eraydeeda, waxaanan ka soo qaadanaynaa;
Shishe qofaad u jeceshahay sheedda ma iska eegteen
Iyo shuqulka caashaqa baahidaad ku shawrteen,
Idinkoon wax sheegeyn, shaydadana kaba dhigin
Sharacle xishood jira waa shax laba gayaanle si yar
ma u shushubiseen.!!!
Ma garan karo dareenka waqtigaa Axmed Saleebaan laakinse marxalladuu waqtigaa uu ku cabiray runtii waa mid lala qushuuco oo layaab leh waana mid laga dhex dhadhansan karo erayada qurux badan ee dareenka leh iyo isticmaalkooda.
Hadaan si kala qaad-qaadno inagoo ku salaynayna bal halkee ugu dhaw ee uu dareenkani ku abuurmaa, sidey laba qof oo aan isku dhaweyn u wadda xidhiidhi karaan, aan soo qaadano mar kowaad araga iyo qaabka uu u dhaco kadibna waxaynu kala saari doono faraqa u dhaxeeya araga caadiga ah iyo kan dareenka leh, waxa inoo xigi doonto qaabka aragu fariinta dareenka leh ugu gudbiyo qalbi kale oo dareemi kara, intaa markaynu isla fahano waxaanu usoo noqon doona meerisyada heesta.
Araga caadiga ahi waa mid u dhaca sida quman ee lagu yaqaan, shay baad aragtay, shaygaa aad aragtay humaagiisu wuxuu sii dhex maraa laba dareere oo ku qaloociya humaagaas barta araga isha ee retina-da, intaa kadib humaagaasi qalib buu ugu samaysmaa retina-da baradaasna waxa ku xidhan dareemayaal qaabilsan inay qaadaan humaagsaan <optic nerve> . U fiirso laba indhoodba waxay sidaan humaag isku mida laakinse is dhamaystira barta ay dareemayaasha ishu ka sameeyaan isku talaabta ayay isugu gudbiyaan humaagooda sidaana waxa loogu gudbiyaa maskada, ugu danbeyntana waxa la saxaa humaagii qalibnaa sidaasna waxa lagu dhamaystiraa humaagaasi wuxuu yahay.
Hadaba araga caadiga ah iyo kan dareenka lehi maxay ku kala duwan yihiin, sida aynu soo sheegnay araga caadiga ahi uma baahna hawl ka badan inta ay qabtaan dareemayaasha aragu laakin in aragaasi noqdo mid dareen leh waa mid ubaahan wax ka badan seddex dheecaan oo cariya mareego dalooda jacaylka ee loo yaqaan afka qalaad<VTA>.
Shishe qofaad u jeceshahay sheed ma iska eegteen
Bal dareenkan yaabka badan ee uu muujiyey axmed saleebaan ila eeg, axmed saleen baan <AUN> inuu humaagaas muujiyo wuxuu adeegsaday dareenka indhaha wax micno ahse uma samaynayso qof dareenkaas indhah uu ka maqan yahay ama la’a.
Marka kowaad waynu wada naqanaa dareenka uu ka mudan yahay qof niyadaad ku wayni, waayo waxaan dadka kale u muuqan baa adiga ku muuqda, waxa jira dareen aan cidba kula wadaageyn oo ay maskaxdaadu kala hufayso iyo xusuus muxibbo ku dheehan tahay.
Hadaba maxay tahay shuqulkan, aragan iyo baahidan araga lagu wadaagayaa ? waa dareen qofba inta uu ka soo maray uu ku cabiri karro sababta keentay in arag baahi dhan lagu wadaago. Waxay ila thay fikirkay anigoo sababna ku lifaaqi doona caqli gal aan u arkay sidan;
‘Marka kowaad ee ishaadu ku dhacdo ruux dareen kugu sidkay, isla ilbidhiqsiyadaa gudahood waxa la soo daaya dheecaano qayb libaax leh ka qaata dareenkan iyo abuurankiisa inuu noqdo mid ku raadeeya, dheecanadaasi waxay cariyaan dal-dalool yar-yar oo kamid ah maskaxda oo layidhaah VTA waa afar dalool oo bedka yar ku leh maskaxda laguna sheegay inay yihiin mareegaha danabeed ee jacaylka.
Maxaa lagu ogaaday in dal-daloodani ay jiraan qayb libaax lehna ka qaataan abuurka dareenkan, ‘mar jamacada darasaad ka ee Alberta Einstein lagu sameeyey daraasad lagu eegayo maxaa isbeddela marka uu qofku jacaylkiisi hore ka guuro isagoo weli aan ka wadda gu’in mid cusubna samaysto. Si loo xaqiijiyo isbedelkan waxa la isticmaalay mashiin lagu ogaado shaqada maskaxda qaybta waqti gaar ah shaqaynaysa <FMRI>, waxa lagu arkay markii la isticmaalay daldaloodan mareegaha jacaylka ilin-dhibiceedo kulul oo sheegaya sawir muujinaya in dareen hore meesha ku jiray oo ka turjumaya in weli uu jiro dareen ku lamaan qofkan.’
Markaa maan la odhan Karin VTA waa meesha ama goobta maskaxda ku taala ee u carisan inay dareen qaabisho waayo in dareen hore oo kugu jiray ka digo rogato waxay muujisay humaag sheegaya in dareen ku lamaana markii horeba, inagoo halkaas ka shidaal qaadanayna marlabaad waxaynu odhan karnaa haddii VTA ay tahay meesha keliya ee dareenka jacaylku waxyeello isla mar ahaantaan waxay noqon kartaa meesha uu dareenkan jacaylku ku samaysmo marka horeba intaan qalbiga laysla qaadhin.
Daymada dareen ka lihi humaaga retina-da ay ku samaysaa markuu u gudbo maskaxda waxay toos u ugu samaysantaa VTA halkaas oo laga cariyo in la soo daayo dopamine oo ah dheecan wax xidhiidhiya , waxa ku baahisaa humaagi maskaxda qaybaheeda kale. Hadaba indareenkaasi noqdo mid kugu abuura daganaashiyo qalbiyeed madaama aad aragtay qof kugu weyn side bay ku imanaysaa inaad baahi iyo shuqul aad wadaagtaan? Labadiina dhinacba humaag maskaxdiinan ku samaysma dabadeed waxa lasoo celiyaa sawiro hore oo ku kedsanaa VTA in humagaas uu noqdo mid dareen kugu abuura waxa lasoo dayaa serotonin. Dheecaankasaana kaa dhiga inaad noqoto qof sheed kala nool qof caashaq u yahay sidaa si leeg buu dhinaca kalena dareemayaa.
Hadaba maxsuulka kasoo baxa shaqadan ayaa noqota mid ka muuqata indhaha dadka isjecel oo turjuma dareenkaaga baahiyeed. Waanu halkuu axmed ka lahaa iyo shuqulka caashaqa baahidaad ku shawrteen, baahida lagu shawrayeyna waa eegmada iyo sawirka labada dhinac ee lamanaha ku qarsoon qalbiyadooda laakinse keliya shucuurtooda ku wadaagi karaan.
shaydadana kaba dhigin
ma u shushubiseen
Axmed Saleebaan AUN wuxuu ahaa humaagyahanka ugu mudnaa sugaanyahanadeena sida ay isheegeen dad looga qaateen ah. Meeriskan waa mid isagna sii dabo socda dareenkii hore ee araga waa mid turjumayana in aragaasi uu ahaa mid sharafi ku dheehneyd si dahsoona ay uwada dheelayeen qalbiyo middeysan.